Nezve GRACE - Nyasha Machina CO., LTD
Nyasha Machina CO., LTD
GRACE yakavakirwa paJiangsu China, uye inochengetedza nyika yose mukuona. Inotarisa pane epurasitiki extrusion uye yekushandura zvakare michina yekugadzira munda, GRACE chigadzirwa chemidziyo inosanganisa dhizaini, R&D, kugadzirwa, kutengesa uye sevhisi.
Mahofisi ekumhiri kwemakungwa
Bhizinesi Rekuvhara Nyika & Matunhu
Isu takapa akasiyana zvigadzirwa uye masevhisi kune vatengi vedu vanobva kune anopfuura nyika zana nemakumi mapfumbamwe nematunhu. Isu tinogara tichienderera nekuvandudza zvigadzirwa zvedu pamwe nesainzi, tekinoroji uye "Hunhu hwevanhu". Chiono chedu kuve chepamusoro chemidziyo yepurasitiki mupasi, zvichibva pane mweya wechirevo ichi, isu hatina kungoitwa nepatinogona napo kusangana nezvinodiwa mumusika, pamwe nekuramba tichisimbisa kukwikwidza kwedu. kuburikidza neyakaganhurirwa vatengi vevatengi, nemakore ekuziva muhunyanzvi, R & D kugona, kugadzira maitiro uye tekinoroji tekinoroji kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi Isu tinodada kuti kuburikidza nekushandira pamwe kwevatengi, zvigadzirwa zvedu zvinochengeta hunyanzvi mukufambisa nekukurumidza kwezvakasiyana zvinodiwa.
Kutsvaga kwedu zvigadzirwa zvehunyanzvi kune zvakawanda zveindasitiri ruzivo kushandira vatengi nekuda kwechinangwa, mukugadzirwa uye kugadzirwa kwezvigadzirwa zvinoratidza kukodzera kwevatengi uye kudiwa kwemusika.